(No. 44, June 21, 2022)
၁။ ပလက်ဝတွင် ဆန်သယ်ယူခွင့် ပိတ်ထားသဖြင့် ဆန်ဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေ
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ဆန်သယ်ယူခွင့် မရရှိတာကြောင့် ဆန်စျေးနှုန်း အဆမတန် မြင့်တက်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ မေ ၂၆ ရက်က စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(အေအေ) တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီက ပလက်ဝရေလမ်းကြောင်းကို ဆန်သယ်ယူခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တာလို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ ပလက်ဝမြို့ ဆန်ကုန်သည်တဦးက “ပလက်ဝကို ဆန်ဘယ်လိုမှ သယ်ယူခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ တချို့ဆိုင်တွေဆိုရင် ရောင်းဖို့ အတွက် ဆန်တွေမရှိတော့ဘူး။ စက်လှေတွေနဲ့ရော ဇက်ရေယာဥ်နဲ့ပါ ဆန်သယ်ခွင့်ပိတ်ထားတာ။ အရင်က ပေါ်ဆန်းမွေး တအိတ်ကို ငါးသောင်းခွဲကျပ်ရောင်းတာကနေ အခု ခုနှစ်သောင်းကျော် ရှစ်သောင်းအထိ ရောင်းချနေကြရတယ်။ ဆန်ညံ့တွေကို လည်း အရင်က ၃ သောင်းခွဲကျပ်ကနေ အခု ငါးသောင်းခွဲမှာထားပြီး ရောင်းနေကြရတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဆန်သယ်ယူခွင့်ရဖို့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးရမယ်လို့တော့ ကြားတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့ကို ကျောက်တော်မြို့ကနေ တပတ် တရက်နှုန်းနဲ့ စစ်ကောင်စီဇက်ရေယာဥ်နဲ့ ပြေးဆွဲနေပေမယ့် အခု အပတ်မှာ တောင်ကျရေကျပြီး မြစ်ရေကြီးနေတာကြောင့် ပြေးဆွဲဖို့ မသေချာတာကြောင့် ကုန်စျေးနှုန်းတွေ အခုထက်မြင့် တက်လာနိုင်တယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ ပလက်ဝမြို့မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက် အရင်ထက် ကုန်စျေးနှုန်းတွေ တဆခွဲ လောက်မြင့်တက်သွားတယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။ “တိုက်ပွဲ မဖြစ်ခင်က ဆိုရင်ဆန်တအိတ်ကို ငါးသောင်းလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အခုက ခုနှစ်သောင်းကျော် ရှစ်သောင်းလောက်အထိ ပေးပြီးဝယ်နေကြရတယ်။ စက်သုံးဆီတွေကလည်း အရင်က တသောင်းခွဲကနေ အခု နှစ်သောင်းကျော်ပေးပြီး ဝယ်နေကြရတယ်။ မနက်ဖြန် ဇက်ရေယာဥ်မထွက်ဘူး ကြားတယ်။ မထွက်ခဲ့ ရင်တော့ ကုန်စျေးနှုန်းတွေ ပိုပြီးမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်။” ပလက်ဝမြို့ကို ကျောက်တော်ကနေ စစ်ကောင်စီဇက်ရေယာဥ်နဲ့ တပတ်ကို တရက်ကျ ပြေးဆွဲပေးနေပြီး ပလက်ဝရဲ့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက် ကျောက်တော်မြို့ကို အဓိက အားထား နေရတာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/539526
၂။ ကျောက်တော် ဒေသခံ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုဇော်ဝင်း(လူထုဇော်ဝင်း)ကို မြန်မာ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော် ဒေသခံ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုဇော်ဝင်း(လူထုဇော်ဝင်း)ကို ယနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက မြန်မာ စစ်တပ်က နေအိမ်သို့ လာရောက်ပြီး ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း မိသားစုများက Western News ကို ပြောသည်။ ယနေ့ မနက်ပိုင်း ၁၀ နာရီဝန်းကျင်လောက် ကိုဇော်ဝင်းကို စစ်ကောင်စီတပ်သား ၄၀ လောက်က နေအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ခင်လှစံက Western News ကို ပြောသည်။ “ကိုဇော်ဝင်းကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခေါ်သွားတယ်။ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း ၁၀ နာရီလောက်ခေါ်သွားတာပါ။ စစ်သား အယောက် ၄၀ လောက်ရှိတယ်။ အိမ်ရှေ့အိမ်နောက်အကုန် ဝိုင်းထားတယ်။ ရဲနှစ်ယောက်ပါတယ်။ စစ်ကားတွေနဲ့ ဝင်လာပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်”ဟုပြောသည်။
ကျောက်တော် ဒေသခံ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုဇော်ဝင်း(လူထုဇော်ဝင်း)ကို မြန်မာ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွားပြီး မည်သည့်နေရာ သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းကို မသိရကြောင်း မပြစ်မရှိရင် ပြန်လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ခင်လှစံက Western News ကို ပြောသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များက ကျောက်တော်မြို့ကလုံခြုံရေးများကို တင်းကျပ်စွာချထားပြီး မြို့အတွင်းက နေအိမ်တစ်ချို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွယ်မှုများလုပ်နေဆောင်နေကာ မြို့ခံအချို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီး စစ်နေမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြာင်း သိရသည်။ ကျောက်တော် ဒေသခံ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုဇော်ဝင်း(လူထုဇော်ဝင်း)သည် စစ်ဘေးရှောင်းအရေး၊ လယ်ယာမြေအရေးနှင့် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွင် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူရအား ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ စစ်ကောင်စီတပ်သားများက AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့၍ စစ်ကောင်စီတပ်သား များကို လည်း ပြန်လည်ဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ကပြုလုပ်သည့် ULA/AA ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးခိုင်သုခက ပြောဆိုခဲ့သည်။
၃။ စစ်ကောင်စီတပ်ရွှေ့ခိုင်းသည့် SSPP တပ်စခန်း (၃) ခုကို လကုန်ထိ အချိန်ပေးရွှေ့ခိုင်း
စစ်ကောင်စီက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၊ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSPP/SSA) ၏ အရေးပါသော တပ်စခန်း (၃) ခုကို ယခုလ ဇွန် (၃၀) ရက် အပြီးရွှေ့ပေးရန် ပြောထားသော်လည်း SSPP ဘက်က ပြောင်းရွှေ့မည်မဟုတ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရ သည်။ စစ်ကောင်စီမှ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းသည့် SSPP/SSA ၏ တပ်စခန်း (၃) ခုမှာ အရေးပါသော စခန်းဖြစ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့မည် မဟုတ်ကြောင်း SSPP ၏ တပ်မှူးတစ်ဦး ကပြောသည်။ “အထက်အမိန့်ထုတ်ထားပြီးပါပြီ တပ်ဆုတ်ဖို့ မရှိပါဘူး။ သူတို့ (စစ်ကောင်စီ) က ဆုတ်ခိုင်းတဲ့ တပ် (၃) ခုစလုံးက အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်” ဟု SSPP ၏တပ်မှူးတစ်ဦး ကသျှမ်းသံတော် ဆင့် ကိုပြောသည်။
ထိုတပ်စခန်း (၃) နေရာသည် မိုင်းရှူးမြို့ နှင့် တန့်ယန်းမြို့ကြားရှိပြီး ကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိသည့် တပ်စခန်းများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “လက်ရှိမှာတော့ ကျနော်တို့ဘက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတော့ရှိတယ်။ နောက်ဆုတ်ဖို့တော့မရှိ ဘူး။ လက်ရှိချိန်ထိတော့ စကစ ဘက်က အင်အားဖြည့်တင်းတာတော့မရှိဘူး။ အနည်းငယ် လှုပ်ရှားသွားလာတာပဲရှိတယ်” ဟု SSPP ၏တပ်မှူးတစ်ဦး ကပြောသည်။ စစ်ကောင်စီသည် ဇွန် (၄) ရက်နေ့က SSPP ၏ တပ်စခန်းကို ဇွန် (၁၀) ရက်နေ့မှ နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားရမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း လက်ရှိမှာ ဇွန် (၃၀) ရက်သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/28699
၄။ ဖားကန့်တွင် ဒလန်ဟုသတင်းထွက်နေသည့် အမျိုးသား ၃ ဦး ပစ်သတ်ခံရ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် မှော်စီဆာနှင့်လုံးခင်းကျေးရွာ ၂ ခု၏ နယ်နမိတ်အစပ်နားတွင် ဒလန်ဟုဆိုရသော အမျိုးသားသုံးဦး လက်နောက်ပြန်ကြိုးသုတ်ကာ ပစ်သတ်ခံထားရပြီး သေဆုံးနေသည့် ရုပ်အလောင်း ယနေ့နံနက်ပိုင်းက တွေ့ရှိ ရကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်သည် ယနေ့နံနက် အစောပိုင်း ၂ နာရီခန့်အချိန်တွင် မှော်စီဆာနှင့် လုံးခင်း ကျေးရွာ ၂ ခု၏ အစပ်ကြားရှိ ပေါ်ဦး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသား သုံးဦးစလုံးကို လက်နောက် ပြန်ကြိုးသုတ်၍ သေနတ်ပစ်သတ်သွားကြောင်းဖြစ်သည်ဟု ဖားကန့် ဒေသခံတစ်ဦးက KNG သို့ပြောသည်။ “အခုသတ်ခံထားရ တဲ့သုံးယေက်က ဒလန်ဆိုပြီးသတင်း ထွက်နေတဲ့ လူတွေလို့ပြောကြတယ်။ ၃ ယောက်စလုံးကို ဦးခေါင်းမှာပစ်သတ်ထားတာ။ မနက် ၆ နာရီလောက်မှာက တစ်ယောက်တဲ့ မသေသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ နောက် ၇ နာရီလောက်မှာ အဲ့အလောင်းတွေကို နာရေးကူညီမှုအသင်းတစ်ခုကလာကောက်ယူသွားပြီ။ ဖြစ်တာက ဒီမနက် မိုးမလင်းခင်လောက်မှာ ဖြစ်သွာတာနေမှာ။ အာလုံး က ဒီမနက်မှ တွေ့ကြတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ယခုသတ်ခံရသည့် အမျိုသားသုံးဦးသည် တောမှော်ကျေးရွာမှ အသက် ၆၀ အရွယ်တစ်ဦး၊ မဆွပ်ယန်ကျေးရွာမှ အသက် ၅၀ အရွယ်တစ်ဦးနှင့် ဆိုင်းဂျာဘွမ်ကျေးရွာမှ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိအမျိုးသားသုံးဦးတို့ဖြစ်ကြပြီး မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းကပစ်သတ်သွားသည်ကို အသေးစိတ်မသိရသေးပေ။ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်းမှ စစ်ကောင်စီလက် အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများများနှင့် ဒလန်ဟုသတင်းထွက်ပေါ်နေသူများ သတ်ဖြတ် ခံရမှု မကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ယခုဇွန်လအထိ သတ်ဖြတ်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၂၀ ဦးခန့်အထိရှိခဲ့သည်။ https://burmese. kachinnews.com/2022/06/20/jun20-az1/
၅။ ပြည်သူ့စစ်က မဲဆန္ဒရှင်ကို ကားဖြင့် ကြိုပို့လုပ်သည်ဟု ဝန်ခံသော်လည်း တရားရုံးက ပြည်သူ့စစ်ကို အနိုင်ပေးကာ မိုင်းဖြတ် SNLD အမတ်လောင်းကို ပြစ်ဒဏ်ချ
အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိဟောင်း ဦးလင်းဇော်ထွန်းအတွက် မဲဆန္ဒရှင်များကို ကားဖြင့် အကြိုအပို့ပြုလုပ်သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး နမ့်ယွန်းပြည်သူ့စစ်က မိုင်းဖြတ် SNLD အမတ်လောင်းကို ၆၆ (ဃ)ဖြင့် တရားစွဲသည့် အမှုတွင် SNLD အမတ်လောင်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ SNLD အမတ်လောင်း ဦးကျဖေ့ကို မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်တရားရုံးက ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ)အတွက် ထောင်ဒဏ် ၉ လ (သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် ၅ သိန်းကို ဇွန်လ ၁၇ ရက်က ချမှတ်လိုက်ကြောင်း တရားရုံးနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ် လောင်း ဦးလင်းဇော်ထွန်းအတွက် မဲပေးရန် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များကို နမ့်ယွန်းပြည်သူ့စစ်က ကားဖြင့် အပို့အကြို ပြုလုပ်ပေး သည့်အကြောင်းကို ဦးကျဖေ့က လူမှုကွန်ယက်တွင် တင်သည့်အတွက် ဦးကျဖေ့ကို နမ့်ယွန်းပြည်သူ့စစ်က ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက တရားစွဲခြင်းဖြစ်သည်။
တရားရုံးတွင် နမ့်ယွန်းပြည်သူစစ်များက မဲဆန္ဒရှင်များကို ကားဖြင့် ကြိုပို့ပြုလုပ်သည်ဟု ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် တရားရုံးက ပြည်သူ့စစ်ကို အနိုင်ပေးကာ SNLD အမတ်လောင်းကို ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ နီးစပ်သူက ပြောသည်။ “SNLD အမတ်လောင်းကတော့ ဒဏ်ငွေ ၅ သိန်း ဆောင်လိုက်ရတာပေါ့။ ပြည်သူ့စစ်က မဲဆန္ဒရှင်ကို အကြိုအပို့ လုပ်ပေးတာကိုလည်း တရားရုံးမှာ ဝန်ခံတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့မဟုတ်ဘဲ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ရပ်ကျေးစာရေးတွေပေါင်းပြီး ပြည်သူ့စစ်တွကို ဥပဒေမဲ့ခိုင်းတယ်ဆိုတာလည်း ဝန်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြစ်ဒဏ်ချခံလိုက်ရ တာပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အနိုင်ရခဲ့ပြီး NLD နှင့် SNLD ပါတီများမှ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများရှိခဲ့ကြောင်း ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့ သည်။ ဦးလင်းဇော်ထွန်းသည် ဦးကိုနီ အသတ်ခံရသည့် ကိစ္စတွင် အဓိက ကြိုးကိုင်သူအဖြစ် လူသိများသည့် အောင်ဝင်းခိုင်နှင့် ပတ်သက်မှုရှိသည့်အတွက် လူသိများသူဖြစ်သည်။
၆။ ကျောက်တော်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို အေအေက ဖမ်းဆီး
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ရှိ မြို့မရဲစခန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးအား ရက္ခိုင့်တပ်တော် (အေအေ) က ဇွန် ၂ဝ ရက် ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ ကျောက်တော်မြို့ မြို့သစ်ရပ်ကွက်ရှိ ဘောလုံးကွင်းအနီးမှာ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ “ဟုတ်တယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် သုံးဦးကို စောစောကဖမ်းသွားကြတာ။ အခုလက်ရှိ အနေအထားအရ စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို အေအေက ဖမ်း။ အေအေ အဖွဲ့ဝင်တွေကို စစ်ကောင်စီက ဖမ်းတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်လာနေကြတယ်”လို့ မြောက်ဦးဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတာက ကျောက်တော်မြို့မ ရဲစခန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဲအုပ် ၁ ဦး၊ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ၁ ဦးနဲ့ ရဲတပ်သား ၁ ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ ကျောက်တော် ဒေသခံဦးက ပြောပါတယ်။
အလားတူ ဇွန် ၁၆ ရက်ကလည်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးစ္စည်း အရောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အပါအဝင် ဒေသခံ ၁၀ ကျော်လောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။‌ ဇွန်လ ၁၇ ရက်ကလည်း မြောက်ဦးမြို့နယ် တိန်ညိုရဲစခန်း မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အသက် ၄ဝ အရွယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦးကို အေအေ က ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဇွန် ၁၁ ရက်မှ ဇွန်လ ၂ဝ ရက်အထိ ၁ဝ ရက်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကို AA က ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/539571
၇။ ကရင်နီပြည်ရှိ အသင်းအဖွဲ့များ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ကြရန် KNDF တိုက်တွန်း
ကရင်နီပြည်ရှိ ပြည်သူလူထုအပါအဝင် အသင်းအဖွဲ့များ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ပြုတ် တိုက်ဖျက်ကြရန် ဇွန်လ၂၁ ရက်တွင် ကျရောက်သည့် ၁၄၇ နှစ်မြောက် ကရင်နီ အမျိုးသားများနေ့သို့ ပေးပို့သည့် KNDF ၏ သဝဏ်လွှာ၌ တိုက်တွန်းထားသည်။ KNDF အနေနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားနှင့် ကရင်နီပြည်ရှိ ပြည်သူလူထုအတွက် ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်ရှိသည့် ပြည်နယ်တခုအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုတွင် ရပ်တည် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည့်အပြင် ဌာနေ တိုင်းရင်းသားများ၏ လူနည်းစု အခွင့်အရေး၊ တန်းတူ အခွင့်အရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ကို အနာဂတ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတွင် တိကျစွာ ကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းသာမက အမှန်တကယ် အကောင် အထည် ဖော်လာနိုင်ရန်လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သဝဏ်လွှာတွင် ဆိုထားသည်။ ကရင်နီ အမျိုးသားများ၏ ရည်မှန်းချက်ကို တားဆီးသည့် အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းချက်တူသည့် အင်အားစုများနှင့် လက်တွဲအလုပ်လုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း KNDF က ပြောသည်။ KNDF သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် တပ်ရင်းပေါင်း ၂၀ ခန့် ဖွဲ့စည်းထားကာ တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၆၀၀၀ ကျော်ရှိနေကြောင်း KNDF နှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သိရသည်။
KNDF ဖြစ်ပေါ်လာရန် ကူညီတည်ထောင်ပေးခဲ့သည့် ကရင်နီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သော ကရင်နီအမျိုးသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခူဦးရယ်ကလည်း လက်ရှိကာလသည် ကရင်နီအမျိုးသားများကြား စည်းလုံးညီညွတ်ရန် အထူးလိုအပ်သည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း ၁၄၇ နှစ်မြောက် ကရင်နီအမျိုးသားများနေ့ အထိမ်းအမှတ် မိန့်ခွန်းတွင် ပြောသည်။ ၎င်းက “ကရင်နီအမျိုးသားများဟာ ယနေ့ ဖြစ်ပျက်၊ ပြောင်းလဲနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ အချိန်ကာလမှာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များနဲအတူ ကရင်နီအမျိုးသားများအကြား ဘုံသဘောထားရရှိပြီး အတူတကွစည်းလုံးစွာနဲ့ အကြမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းရေးကို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ ကရင်နီအမျိုးသားများနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ အင်္ဂလိပ်တို့ ကျူးကျော်ပြီးနောက် ၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်နှင့် ဗမာဘုရင် တို့ကြား ကရင်နီဒေသအား မည်သူမျှ ကျူးကျော်ခြင်းမပြုရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်နေ့အား အစွဲပြုကာ ကရင်နီတိုင်း ရင်းသားများက သတ်မှတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၉။ ကျောင်းသူ/သားနှင့် ကျောင်းအဆောက်အဦများအား ထိခိုက်စေမည်မဟုတ် ဟု ချင်းပြည်နယ်အခြေစိုက် CNO/CNDF ထုတ်ပြန်
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေသည့် ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် /တပ်မတော် (CNO/CNDF) အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ စစ်ဥပဒေကို လိုက်နာပြီး ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းအဆောက်အဦများကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ် ကြောင်းနှင့် အဆိုပါဖြစ်စဉ်များကိုလည်း ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ သည်။ စစ်ကောင်စီတပ်သည် စာသင်ကျောင်းများအနီးတွင်ပစ်ခတ်ခြင်း ဖောက်ခွဲခြင်း များပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၉ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က ဖလမ်းမြို့တပ်ကုန်းမှ လက်နက်ကြီး ငါးကြိမ်ခန့် အကြောင်းမဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။ ထို့ပြင် ဇွန်လ ၁၇ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်အချိန်ကလည်း တလန်လိုရပ်ကွက် အ.ထ.က (၃) ကျောင်းတွင်ရှိသည့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တပ်သားတစ်ဦး အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်များသည် အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့် ပစ်ခတ်သယောင်ပြုကာ အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ခ.လ.ရ (၂၆၈) တပ်မှလည်း ၁၂၂ မမ ဖြင့် ရမ်းသန်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ စစ်ကောင်စီတပ်၏ ရမ်းသန်းပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦး ၏လက်မောင်းတွင် ကျည်ထိဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီး အိမ်အ တွင်းရှိ ပစ္စည်းတချို့ပျက်စီးကာ ဘိုင်လာကျေးရွာ (Baila) ရှိ နေအိမ်တစ်လုံး လက်နက်ကြီးထိမှန် ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖလမ်းမြို့အခြေစိုက် ခ.လ.ရ တပ်ရင်း (၂၈၆)သည် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၅ ရက် ညပိုင်းက ကျင်မွာလ်ရပ်ကွက်ရှိ အ.ထ.က (၂) ကျောင်းအနီးတွင် အသံမိုင်းခွဲ၍ ပြည်သူလူထုအား အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ အသံမိုင်းခွဲလုပ်ဆောင်ချက်သည် ပြည်သူလူထုနှင့် CNO/CNDF များအကြား အမြင်မှားစေရန် စစ်ကောင်စီက သွေးခွဲ ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး “မိမိတို့၏ သားသမီးများ အလောင်းမကောက်လိုပါက ကျောင်းမထားနဲ့” ဟူသော ခြိမ်းခြောက် စာတချို့ကိုလည်း စစ်ကောင်စီက လိုက်လံကပ်ထားကြောင်းသိရသည်။
၁၀။ ကျောက်မဲမြို့နယ် TNLA ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးနေရသည့် စစ်ရှောင်များ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ကောင်းမူးကျေးရွာမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် စစ်ရှောင်များ တစ်ချို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ခက်ခဲနေလျက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ဇွန် ၁၇ ရက်က ထိုစစ်ရှောင်များကို တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီး ဖမ်းဆီးမည်ဟုခြိမ်းခြောက်သောကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်လာသည့် သူများသာဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကျေးရွာမှ စစ်ရှောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ကိုယ့်အစီစဉ်ဖြင့် တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “ ကျမတို့ အခု ကျေးရွာထဲမှာ မနေတော့ပါဘူး။ တစ်ခြားတစ်နေရာမှာ ထွက်လာ နေလိုက်တာပါ။ ကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ပဲ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ သွားနေကြတာပါ။ ကျမတို့လည်း ကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ပဲ နေရာသစ်ကိုရှာပြီး ထွက်လာခဲ့တာပါ”ဟု ကောင်းမူးကျေးရွာမှ စစ်ရှောင် ထွက်လာသည့် အမျိုးသမီးက ပြောသည်။
လက်ရှိ ထိုစစ်ရှောင်များသည် အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိသဖြင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် ခက်ခဲနေ ကြောင်းသိရသည်။ “ခက်ခဲတာပေါ့။ နေရာအသစ်မှာဆိုတော့ အစကနေပြန်စရတယ်။ ဒီမှာက အလုပ်အကိုင်လည်း မရှိတော့ ဝင်ငွေလည်း မရှိဘူး။ ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူး။ စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း ခက်ခဲတာပေါ့” ဟု ၎င်းအမျိုးသမီးက ပြောသည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး TNLA ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါ။ ကောင်းမူးကျေးရွာထဲတွင် စစ်ရှောင်ပြည်သူများအကြား သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တပ်သားများ ရှိသည်ဟုဆိုကာ TNLA က လာရောက် ဖမ်းဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော ကြောင့် စစ်ရှောင်များက ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၁။ ကွတ်ခိုင်မြို့ပေါ်ရောက် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တချို့ နေရပ်ပြန်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ကာလိုင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်က စစ် ကောင်စီတပ်နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA တို့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကွတ်ခိုင်မြို့ပေါ်ကို ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ခန့်ဟာ ဇွန်လ ၂၀ ရက် ဒီနေ့ နေရပ်ပြန်နေကြပါတယ်။ ကွတ်ခိုင်မြို့ပေါ်က မနောကွင်းနဲ့ ရိုမန်ကက်သလစ်ကျောင်းမှာ ဇွပ်အောင် ဒုက္ခသည် စခန်းက ၂၀၀ ခန့်ကို လက်ခံထားပြီး တောင်တန်းသာသနပြု ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတော့ ကုန်းချမ်းနဲ့ မန်ဆာရွာ က ထွက်ပြေးလာသူ ၃၀၀ ခန့်ကို လက်ခံထားပြီး တချို့ကတော့ ဒီနေ့ နေရပ်ပြန်ပို့ပေးနေတာလို့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီပို့ဆောင် ပေးတဲ့ ကိုတင်ဝင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“တိုက်ပွဲတော့ ငြိမ်သွားပြီပေါ့နော်။ သူတို့လဲ အိမ်ပြန်ချင်ကြတယ်ဆိုလို့ ပြန်ပို့ပေးလိုက်တာ၊ တောင် တန်းကျောင်းနဲ့ မနောကွင်းက အားလုံးပြန်ပြီ၊ ရိုမန်ကက်သလစ်ကျောင်းက သူတွေပဲကျန်နေတယ်” ကွတ်ခိုင်မြို့ ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရာကျောင်းမှာတော့ လူဦးရေ ၉၀ ဝန်းကျင် ကျန်နေသေးပြီး နယ်မြေအေးချမ်းရင် နေရပ်ပြန်ကြမှာပါလို့ ဘုရားကျောင်း တာဝန်ရှိသူ ဆရာဂွန်နန်ကလည်း ပြောပါတယ်။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ကာလိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းချမ်းကျေးရွာအနီး ဇွန်လ ၁၆ ရက် မနက်ပိုင်းက စစ်ကောင် စီတပ်ကတစ်ဘက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ PDF တွေ ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက တဘက်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ https://www.rfa.org/burmese/news/kutkai-refugees-return-home-06202022054841.html
၁၂။ ဖာပွန်ခရိုင်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်က လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်သဖြင့် ဒေသခံ ၁ ဦးဒဏ်ရာရ
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအန်ယူ)၊ တပ်မဟာ ၅ ၊ ဖာပွန်(မူတြော်)ခရိုင်၊ ဘူးသိုမြို့နယ်၊ မယ်ကလော ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဒေလော်ပူကျေးရွာကို ဇွန် ၁၈ ရက် မနက် ၉ နာရီလောက်က စစ်ကောင်စီတပ်က ဝေမှုံတပ်စခန်းကနေ လက်နက်ကြီး နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒေသခံပြည်သူ တယောက် ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ကေအန်ယူ က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဖာပွန်မြို့ တောင်ဘက် စစ်ကောင်စီရဲ့ဝေမှုံအခြေစိုက်တပ်စခန်းကနေ ဒေလော်ပူကျေးရွာကို လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒေသခံကျေးရွာသား ပိုထိုသေရဲ့လယ်တဲအနီး ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက် ပိုထိုသေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ ပေါင်ကိုထိမှန်ပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။
ဇွန် ၁၇ ရက်က စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ နယ်ခြားစောင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက အများပြည်သူတွေ နေ့စဉ်သွားလာနေတဲ့ ကမာမို(ကမမောင်း)နဲ့ ကတဲတိ(ကတိုင်တိ)ကားလမ်းကို ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်တဲ့အပြင် ဖြတ်သန်းသွား လာသူတွေကို ပစ်ခတ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုပါတယ်။ အလားတူ ဇွန် ၁၆ ရက်က အမှတ် ၁၀၁၃ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း မှူး မောင်လှကြိုင်က ကတဲတိ(ကတိုင်တိ)ကျေးရွာအတွင်းကို အပြင်လူတွေ လုံးဝဝင်ထွက်သွားလာတာ မပြုလုပ်ဖို့နဲ့ ရွာပြင် ထွက်ခွာတဲ့ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားတွေကိုတွေ့ရှိ ကြားသိပါက ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခြိမ်းခြောက် ထားကြောင်း ကေအန်ယူက သတင်းထုတ်ပြန် ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/539677
၁၃။ မြစ်ကြီးနားတွင် ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက် Palm spring ဟိုတယ်အနီး ယနေ့နံနက် ၇ နာရီခန့်က ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားယာဉ် တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကားက ဆိုင်ကယ်ကို ဝင်တိုက်ခဲ့သဖြင့် အသက် ၂၄ နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိ ယောက်ျားလေးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ပရဟိတအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The 74 Media ကိုပြော သည်။ “တွေ့ရသလောက်တော့ သူတို့ သွားနေရင်းမှာ ကားဝင်တိုက်တယ်ထင်တယ် ဆိုင်ကယ်ကတော့ နည်းနည်းလွင့်သွားတယ်။ ကားက crown အဖြူရောင်ပါ ကားသမားကတော့ မသိလိုက်ဘူး။ ထွက်ပြေးလိုက်သလား မသိဘူး။ အဓိက လူနာ ဦးစားပေး တယ်ဆိုတော့။” ဟုပြောသည်။
သေဆုံးခဲ့သည့် အသက် ၂၄ နှစ်ခန့်အရွယ် ယောက်ျားလေး၏ အလောင်းကို မြစ်ကြီးနားဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး ထိ ခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကို အရေးပေါ်ဌာနသို့ပို့ဆောင်ထားပြီးကြောင်း သူကပြောသည်။ ဆိုင်ကယ်တွင် လိုက်ပါစီးနင်းလာသည့် အသက် ၂၀ ခန့်အရွယ် ယောက်ျားလေးတစ်ဦး ခါး၊ ပေါင်နှင့် ရင်ဘတ်တို့တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အသက် ၄၀ ခန့် အရွယ် ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ နောင်နန်းရပ်ကွက် ၈ မိုင်ဘော်လုံး ကွင်းအနီးတွင်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်းထွက် ပြေးသွားခဲ့သည်။
၁၄။ ကရင်နီလူထုနှင့်အတူ နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်သည်အထိ လက်တွဲသွားမည်ဟု NUG သဝဏ်လွှာပေးပို့
စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြစ်ပြတ်ပြီး နိုင်ငံရေးတန်းတူမှုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရာမှာ ကရင်နီပြည်သူလူထုရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့နဲ့ ကရင်နီ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးနဲ့အတူ ခိုင်မာစွာရပ်တည်ကာ အခုဆင်နွှဲနေတဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်အထိ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)က သဝဏ်လွှာ ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ဇွန် ၂၁ ရက် ဒီကနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ၁၄၇ နှစ်မြောက် ကရင်နီအမျိုးသားနေ့အတွက် သဝဏ်လွှာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နေရာဒေသအသီးသီးမှာ ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြတဲ့ ကရင်နီလူမျိုးအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြစေဖို့လည်း ဆုတောင်းပေးထားတာပါ။ ကရင်နီပြည်ဟာ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တာကြောင့် ကရင်နီပြည်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အုပ်ချုပ်စိုးမိုးခြင်းပြုလုပ်ကြမယ်မဟုတ်ကြောင်း ဗမာဘုရင်ကိုယ်စား ကင်းဝန် မင်းကြီးဦးကောင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံချုပ် ကိုယ်စား ဆာဒေါ့ကလပ်ဖောဆစ်(သ်) တို့က ၁၈၇၅ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၁ ရက်က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြကာ အဆိုပါနေ့ကို ကရင်နီအမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး နှစ်စဥ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိကာလ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက မတရားအာဏာသိမ်းယူမှုကို ပြည်သူတရပ်လုံးက ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ကာလဟာ ၁ နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို ဒီကာလတွေအတွင်း တောရောမြို့ပါမကျန် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေ၊ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြား တိုက်ပွဲတွေလည်း ပြင်းထန် နေတာပါ။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က ပေးပို့တဲ့ သဝဏ်လွှာထဲမှာတော့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ မတရား အာဏာ လုယူတဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို ကရင်နီ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ မဆုတ်မနစ်သော စွန့်လွတ် စွန့်စား၊ ဇွဲလုံ့လတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ခုခံ တော်လှန်နေကြတာကို တွေ့ရှိရတဲ့အတွက်လည်းများစွာ လေးစားဂုဏ်ယူတယ်လို့ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/539689
၁၅။ အသက်(၉၃) နှစ်အရွယ် ဝါရင့် ကရင့်တော်လှန်ရေး တပ်မှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး စောထုဝေါ် ၏ နောက်ဆုံးခရီး
လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် ဝါရင့် ကရင့်တော်လှန်ရေး တပ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ အသက် (၉၃) နှစ်အရွယ် ဒု-ဗိုလ်မှူး ကြီးစောထုဝေါ်၏ ဈာပနာ အခမ်းအနားကို ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KNLA ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးစောထုဝေါ်သည် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့က လူကြီးရောဂါဖြင့် KNLA ဌာနချုပ်တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ၏ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအတိုင်း ဘုရားဝတ်ပြု ဆုတောင်းပြီး စစ်ရေးအခမ်း အနားဖြင့် ၎င်း၏ဈာပနပွဲ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူသည် ၁၉၃၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၊ လည်းကူးမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆နှစ်အ ရွယ်မှစ၍ ကရင့်တော်လှန်ရေးထဲသို့ ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် (ယခု KNU တပ်မဟာ(၃)ထဲသို့ အောက်ခြေ ရဲဘော်ဘ၀မှ စတင်၏ တပ်မဟာခရိုင်မှူးအဆင့်ထိ တာဝန်အဆင့်ဆင့် ရယူခဲ့သည်။ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး စောထုဝေါ် သည် ယခင် KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး အမည်ဟူ၍ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှု မတိုင်ခင် KNUP ပါတီဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခု ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သမီးတစ်ဦးနှင့် မြေးမြစ်တချို့ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ https://kicnews.org/2022/06/%e1% 80%a1%e1%80%9e%e1%80%80%e1%80%ba%e1%81%89%e1%81%83
၁၆။ ဖယ်ခုံမြို့နယ်စစ်ကောင်စီ နှင့် PNO မှ စစ်ရှောင်နေအိမ်များထံ ပစ္စည်းဝင်ယူနေ
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ စစ်ကောင်စီ နှင့် ပအိုဝ်း ပြည်သူ့စစ် (PNO) တို့သည် စစ်ရှောင်ပြည်သူ နေအိမ်များထံ ပစ္စည်းဝင်ယူသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ စစ်ကောင်စီ နှင့် PNO တို့သည် ဖယ်ခုံမြို့နယ် လွယ်ပေါကျေးရွာ၊ ဆောင်နန်းခဲကျေးရွာ၊ လဟယ်ကျေးရွာ နှင့် မခေခမ်းကျေးရွာတွင် တပ်ဆွဲထားပြီး စစ်ရှောင်နေကြသည့် ပြည်သူများ၏ နေအိမ် ထဲ ပစ္စည်းများဝင်ယူသွားကြောင်း ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရသိရသည်။ “ အဲ့ရွာတွေမှာက ပြည်သူတွေ စစ်ရှောင်နေတာ။ ရွာထဲမှာ စစ်ကောင်စီ နဲ့ PNO တို့ပဲရှိတယ်။ သူတို့အဲ့ရွာထဲမှာ နေနေတာတော့ကြာနေပြီ။ ရွာထဲမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေ ကိုလည်း ခိုးယူသွားနေတယ်။ အခုမှ ခိုးယူနေတာမဟုတ်ဘူး” ဟု ဖယ်ခုံမြို့နယ် ဒေသခံ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုသို့ စစ်ကောင်စီ နှင့် PNO တို့ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို ခိုးယူသယ်ဆောင်နေလျက်ရှိသောကြောင့် ဇွန်လ ၁၉ ရက်တွင် ဖယ်ခုံမြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီ နှင့် PNO ဘက်မှ ထိခိုက် သေဆုံးမှုများရှိကြောင်း သိရသည်။ “ သူတို့က ရွာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကို ခိုးယူနေတာ။ ဆိုင်ကယ်အစုတ်ကို တောင်တင်ပြီးယူသွားသေးတာ။ သူတို့တင်ပြီးတော့ ယူသွားနေချိန်မှာ ကျနော်တို့က ခြုံခိုပြီးတော့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ သူတို့ ဘက်က သေဆုံးမှုနဲ့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရတဲ့သူရှိတယ်။ PNO ဘက်က သေတာရှိတယ်။ ရွာထဲမှာက စစ်ကောင်စီ နဲ့ PNO တပ်ဖွဲ့ တို့ရှိတယ်” ဟု ဖယ်ခုံမြို့နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
၁၇။ ဖားကန့်-မန္တလေးလမ်းတွင် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံး၊ မိုင်းနှင့် ကျည်ဆန်များ ဖမ်းဆီးရမိ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်- မန္တလေး ကားလမ်း၊ နန့်စီးအောင်ဂိတ်မှာ ဇွန် ၂၀ ရက်က အိမ်စီးကား တစီးပေါ်ကနေ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးတွေ၊ လက်နက်ကျည်ဆန်တွေနဲ့ မိုင်းတွေကို စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေထံက သိရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအစပ် နန့်စီးအောင်ဂိတ်မှာ မနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီလောက်က ရဲနဲ့ စစ်သား တွေ က တားဆီး စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကားထဲကနေ မိုင်း ၈ လုံး ကျည်ဆန်အတောင့် ၅၀၀ နဲ့အတူ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးတွေ ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီဂိတ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဒေသခံတယောက်က ပြောပါတယ်။ “ယာဉ်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ ကားဆရာကို ရိုက်နှက်စစ်ဆေး တာ။ ကားဆရာကလည်းမသိဘူးတဲ့ ပစ္စည်းတွေက အင်ဂျင်ခန်းမှာ ဖွက်ထားတာ။ သူ့ကို ကားမောင်းငှားလို့ မောင်းပေးတာ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တော့ မပါဘူး။” ကားပေါ်မှာ ခရီးသည်လေးယောက် လိုက်ပါလာပြီး သူတို့ကိုလည်း တပ်မမှူးက မိုးညှင်းဘက်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/539589
၁၈။ မြန်မာစစ်သားတစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ပုဏ္ဏားကျွန်း – ရသေ့တောင်ကားလမ်း ပိတ်ထား
မြန်မာစစ်တပ်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) က ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တွင် ပုဏ္ဏားကျွန်း – ရသေ့တောင်ကားလမ်းကို မြန်မာစစ်တပ်က ပိတ်ဆို့တားဆီးထားသောကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပြုလုပ် နေသူများနှင့် ဒေသခံများမှာ အခက်ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု သိရသည်။ ၂၂ မိုင် ၆ ဖာလုံ ရှည်လျားသော အဆိုပါလမ်းတွင် လက်ဝဲစာတိုက်နှင့် ပိန္နဲတောကျေးရွာအနီးရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့တွင် မြန်မာစစ်တပ်က ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူမှုကူညီ‌ ရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်နေသည့် ဆရာတော် သဘာဝနဒီက မိန့်ကြားသည်။ “ စမ်းမဒီးတံတားထိပ်ကနေပါ။ ပုဏ္ဏားကျွန်း ဘက်က သွားတဲ့ကားတွေဆိုရင် မသွားရဆိုပြီးတားတာ‌ပေါ့။ ရသေ့တောင်ဘက်က လာတယ်ဆိုရင်လည်း ပိန္နဲတော ဂိတ်က တားတယ်လို့ပြောတယ်။ ဟိုဘက်ဒီဘက် ဘယ်လိုမှ သွားလို့မရကြတော့ဘူး။ ဒီလမ်းကိုမှီခိုပြီး စီးပွားရေးလုပ်စားနေကြတဲ့ ရွာတွေလည်းရှိတယ်။ ပြီးရင် အဲလမ်းတောက်လျောက်မှာလည်း ရွာပေါင်း မြောက်များစွာရှိတယ်။ ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီကြားမှာရှိတဲ့ ရွာတွေကတော့ ရိက္ခာပြတ်တောက်မှုနဲ့ အခြေခံစားသောက်ကုန် ပြတ်တောက်မှုတွေ စပြီပေါ့” ဟု ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
အဆိုပါ ကားလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၅၀ ခန့်ရှိပြီး ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကို ရေရှည်ပိတ်ထားမည်ဆို ပါက အခက်အခဲပေါင်းစုံနှင့်ကြုံတွေ့လာရနိုင်ကြောင်း ပုဏ္ဏားကျွန်း-ရသေ့တောင်ကားလမ်းတွင် အမြဲပြေးဆွဲနေသည့် ကားမောင်းသူ ဦးခင်ခင်မောင်က ပြောသည်။ “ ကျွန်တော်တို့မှာ ကားတစ်စီးဝယ်ရင်ဆိုတောင် အကြွေးစနစ်နဲ့ ဝယ်ထားတာ တွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီကားလေးတစ်စီးနဲ့ လည်ပတ်လုပ်စားနေကြတာလေ။ အခုကားမထွက်ရဘူးဆိုတော့ အခက်အခဲကို စဉ်းစားကြည့်ပါတော့လေ “ဟု သူကပြောသည်။ ထိုသို့ ကားလမ်းပိတ်ထားမှုမှာ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုသည်ကို မသိရှိရ သော်လည်း ဒေသခံများအတွက် ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကိစ္စများ ထိခိုက်လာမည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုကြသည်။
၁၉။ လောင်းလုံးမှာ တပတ်အတွင်း ဒေသခံ ၂၀ ကျော် အဖမ်းခံရ
တနင်္သာရီတိုင်း၊ လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာ ဇွန်လ ၁၆ ရက်ကနေ ၁၉ ရက် မနေ့ကအထိ လေးရက်အတွင်း ဒေသခံ ၂၀ ကျော်တို့ဟာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးတာ ခံထားရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ လောင်းလုံးမြို့ပေါ်က နေအိမ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်ကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက စစ်ဆေးရှာဖွေ ခဲ့ကြရာ အမျိုးသား ၁၇ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ငါးဦး အပါအဝင် ၂၂ ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ အမည် မဖော်လိုတဲ့ ဒေသခံ တစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။ “အဖမ်းခံရသူတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေ၊ NLD အစိုးရလက်ထက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဟောင်းပေါ့ တစ်ယောက်ပါတယ်။ အခြား သာမာန်ပြည်သူတွေ လည်း ပါတယ်။ လောင်းလုံးသပိတ်မှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖူးသူတွေလည်း ပါတယ်ဗျ” CDM လုပ်ထားသူတွေရဲ့အိမ်တွေကို ရှာဖွေရာ မှာမတွေ့လို့ မိသားစုဝင်တွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ လည်းရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အခုလိုဖမ်းဆီးရာမှာလည်း နာမည်စာရင်း အတိအကျနဲ့ အိမ်တွေအထိကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးတာလို့ ပြောပါတယ်။ လောင်းလုံးမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၄ ရက်ကစပြီး စစ်ကောင်စီတပ်တွေ အင်အားတိုးချ ထားရာ လက်ရှိ စုစုပေါင်းအင်အား ၂၀၀ အထိရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲသပိတ်အင်အားစုတွေ အားကောင်းတဲ့ လောင်းလုံးမြို့ ကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တာတွေ ငြိမ်သွားအောင် အခုလို ဖမ်းဆီးနေတာလို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၉ ရက် မနေ့ညကလည်း လောင်းလုံးမြို့နယ် တီဇစ်ကျေးရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်က ရွာထဲဝင်ရောက်ကာ ရွာသား ရှစ်ယောက်ကို စစ်ဆေးရာမှာ သုံးယောက်ကို ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်ပြီး ကျန်ငါးယောက်ကိုတော့ ဖမ်းထားတယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/ne ws/longlone-civilians-arrested-06202022051511.html
၂၀။ ပင်းတယမြို့နယ် လွှတ်တော်အမတ် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကို မဖမ်းနိုင်လို့ ဆွေမျိုးတွေကို စစ်ကောင်စီ ဖမ်းဆီးသွား
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်းတယမြို့နယ် NLD ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကို စစ်ကောင်စီ များက မဖမ်းဆီးနိုင်သဖြင့် အင်းပလက်ကျေးရွာတွင်ရှိသည့် ၎င်း၏ ဆွေမျိုးများကို ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန် ၁၈ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင်က ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကို မဖမ်းဆီးနိုင်တာကြောင့် ၎င်း၏ ဆွေမျိုး ၂၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက် ညနေပိုင်းတွင် ၁၆ ဦးကို ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဖမ်းဆီးသွားသူများသည် အသက်ကြီးသူများလည်း ပါဝင်သောကြောင့် စစ်ကောင်စီက ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ “ သူတို့ဖမ်းဆီးသွားတာ အသက် ၈၀ လောက်ထိအသက်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်။ သူတို့က ဦထွန်းထွန်းနိုင်ကို မဖမ်းနိုင်လို့ ဆိုပြီးတော့ သူ့ဆွေမျိုး တွေကို ဖမ်းဆီးသွားတာ။ ဓားစားခံအဖြစ် ဖမ်းထားချင်တာပေါ့။ ၂၅ ယောက်ကို ဖမ်းသွားတာ။ ညနေပိုင်းလောက်မှာ ၁၆ ယောက်ပြန်လွတ်လာပေးတယ်” ဟု ပင်းတယမြို့ ဒေသခံအမျိုးသား တစ်ဦးက ပြောသည်။ ပင်းတယမြို့ လက်ရှိ စစ်ကောင်စီ က ၉ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပြီး ထို ၉ ဦးစလုံးသည် အမျိုးသားများ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကို ဖမ်းဆီးရသည့် အကြောင်းရင်းသည် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်က PDF များကို အားပေးသည်ဟုဆိုပြီး ဖမ်းရန် ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ “ သူတို့ အခုချိန်ထိ ဖမ်းထားဆဲက ၉ ယောက်ကျန်တယ်။ အကုန်လုံးက ယောင်္ကျားလေးတွေ ကျန်တာပါ။ လက်ရှိ ပင်းတယရဲစခန်းမှာပဲ။ ဦးထွန်းထွန်းနိုင်က PDF ကို အားပေးတယ်။ ကူညီပံ့ပိုး တယ်ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းချင်တာပါ။ အခုက မဖမ်းနိုင်သေးလို့ သူ့ရဲ့ ဆွေမျိုးကို ဖမ်းဆီးထားတာပါ” ဟု အထက်ပါ ဒေသခံ အမျိုးသား က ပြောသည်။ “ အဲ့နေ့မနက်မှာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ဦးကျော်ငြိမ်းလည်း ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ပြီးမှပဲ ဦးထွန်းထွန်းနိုင် ဆွေမျိုးတွေကိုရွာမှာ သွားဖမ်းတာပါ။ ဦးကျော်ငြိမ်းကသူ ဒလန်ဖြစ်တယ်လေ။ သူက စစ်ကောင်စီက ခိုင်းတာ အကုန်လုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မှာ ပစ္စတိုလက်နက်ကိုင်ခွင့်လည်းရထားတယ်” ဟု ပင်းတယမြို့ ဒေသခံအမျိုးသား တစ်းဦးက ထပ်မံပြောပြသည်။ ပင်းတယမြို့တွင် စစ်ကောင်စီ သတင်းပေး ဒလန်ဟု နာမည်ထွက်သူများသည် ဦးကျော်ငြိမ်း အပါအဝင် ၇ ဦးရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/28692
၂၁။ ဗန်းမောက်မြို့နယ်တွင် ရှမ်းနီလူငယ်ခေါင်းဆောင် ၁ ဦးကို PDF တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီး
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ ရှမ်းနီစာပေယဉ်ကျေးမှုတောင်ပိုင်းတာဝန်ခံနဲ့ ရှမ်းနီလူငယ်ကွန်ယက်ဒုဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းဆေလိုင်း ( ခ ) စိုင်းကျန်အောင် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲလောက်ကPDF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ တယ်လို့ ရှမ်းနီလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရှမ်းနီစာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးပစဉ္စင်း ၁ ပါးနဲ့အတူမံကပကျေးရွာ ဘုးန်တော်ကြီးကျောင်းကိုသွားရောက်စဉ် PDF အဖွဲ့ဝင် ၂၀ လောက်က ကျောင်းပေါ်ကို တက်လာပြီး ဖမ်းသွား တာလို့ ဗန်းမောက်မြို့နယ် ရှမ်းနီစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှူအသင်း အတွေးရေးမှူး စိုင်းထွန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
“သူတို့လူ ၂၀ လောက် ကျောင်းပေါ်ကို ဖိနပ်စီးပြီး တက်လာတယ်။ ပြီးတော့ စိုင်းဆေလိုင်းကို မေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီး ဖမ်းခေါ်သွားတာ။ ဘာကြောင့်မို့ ဖမ်းရသလဲဆိုတာ အကျိုးအကြောင်းလည်း မပြောဘူး။ သူက ရာဇဝတ်သားလည်း မဟုတ် ဘူးလေ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဘာသာသူ စာပေအလုပ်လာလုပ်နေတာ ဒီလိုမဖမ်းသင့်ဘူးလို့ ဆရာတော် က မိန့်တာတောင်မရဘူး။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်း သေနတ်ကဖောက်လိုက်သေးတယ်။ လုံးဝမ လုပ်သင့်ဘူးလို့ ဆရာတော် ပြောပြပါတယ်။ ကျနော်တို့သိသလောက် သူ့မှာဘာရန်ငြိုးရန်စမှမရှိဘူး။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို တက်တက်ကြွကြွလုပ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ပြည်လုံး ကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလည်း လှုပ်ရှားခဲ့တာပဲ။ ရှမ်းနီစစ်သားနဲ့လည်း မပတ်သက်ဘူး။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ဖမ်း ထားလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူး။” ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အဖွဲ့ဟာ PDF ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားပြီး ဘယ်ဒေသဆိုတာတော့ မသိရကြောင်း၊ ဗန်းမောက်ဒေသခံ PDF လို့ယူဆရပြီး သူလွတ်မြောက်လာဖို့အတွက် နီးစပ်ရာ PDF အဖွဲ့တွေကို ဆက်သွယ်မေး မြန်းထားသလို ရှမ်းနီလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ ၊ ဗန်းမောက် ၊ ဟုမ္မလင်း၊ အင်းတော်ကြီးစတဲ့ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေပါ ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီး သူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ သူ့ကိုပြန်မလွှတ်ဘူးဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ အနေ နဲ့ ဒေသထဲအတူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ လည်း ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ဘယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာမှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိဖို့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကို ထိန်းကျောင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်လို့ စိုင်းထွန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/539
၂၂။ ကချင်စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် လူငယ်များ သွေးကြောထဲ ဘိန်းဖြူထိုးသွင်းသုံးစွဲမှု ပိုများလာ
ကချင်ပြည်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ ဝိုင်းမော်မြို့မှာရှိတဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ ဘိန်းဖြူမူးယစ်ဆေး သွေးကြောထဲထိုးသွင်း သုံးစွဲတဲ့လူငယ်တွေ ပိုမိုများပြားလာနေတယ်လို့ စစ်ရှောင်စခန်းနေ ပြည်သူတွေက ပြောပါတယ်။ စစ်ရှောင်စခန်းထဲမှာ နေထိုင် တဲ့ လူငယ်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကနေ စတင်ပြီး မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု တဖြည်းဖြည်းနဲ့ များပြားလာကာ အသက် ၁၅ နှစ် အထက် လူငယ်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်အရွယ်အမျိုးသားတွေအထိ တွေ့ရတယ်လို့ စစ်ရှောင်စခန်းမှာ နေထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးက ပြောပါတယ်။ “ပြောတောင်မပြောချင်တော့ဘူး၊ ကမ္ဘာကြီးကလည်း ဘာတွေဖြစ်လာလဲမသိဘူး၊ စိတ်လဲ ညစ်လာပြီ။ စခန်းထဲကလူငယ်တွေလည်း ဘိန်းသုံးတာတွေ အများကြီးရှိလာတယ်၊ အသက် ၁၅၊ ၁၆ အရွယ်တွေကော ကလေးရှိတဲ့ ကလေးအဖေတွေကောပဲ။ အပြင်မှာသွားသုံးကြတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ဝယ်လို့ရနေတော့ သုံးတဲ့သူ တွေများလာတာ၊ အရင်က စခန်းမှာသုံးတဲ့သူတွေ မရှိသလောက်ပဲ၊ အခုနောက်ပိုင်း သိသိသာသာများလာတယ်၊ တနှစ်ကျော်ရှိလာပြီ။” စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ရှောင်စခန်းတွေကို အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပညာပေးဟောပြောတာတွေ လာရောက်ပြုလုပ်လေ့ရှိပေမဲ့ စခန်းထဲမှာရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ အမျိူးသမီးအများစုသာ လာရောက် နားထောင်ကြပြီး လူငယ်တွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးသူတွေ လာရောက် ပါဝင်တာ မရှိသ လောက်ဘဲလို့ စခန်းထဲက အခြေအနေကို စစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော် အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးနေပြီး၊ စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာကော၊ အပြင်မှာကောပဲ။ ပိုးဆိုးတာ က အခုမှ ဘိန်းဖြူ စသုံးတဲ့လူငယ်တွေ ရှော့ဖြစ်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရတာများလာတယ်။ အခုမှစသုံးတော့ အတိုင်း အဆမရှိ သွေးကြောထဲထိုးထည့်တော့ ရှော့ဖြစ်ပြီး ဂန့်ကုန်တာ၊ ဒီနှစ်လအတွင်း ရှော့ဖြစ်လို့ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ လူငယ်အလောင်း ၁၀ ဝန်းကျင်လိုက်ကောက်ပြီး သင်္ဂြိုဟ်ပေးလိုက်ရတယ်၊ စစ်ရှောင်စခန်းတွေကကော ပါတယ်၊ ဘယ်စစ်ရှောင်စခန်းဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူး။” စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ ရှိတဲ့လူငယ်တွေ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုတွေများလာပေမဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့တားဆီးဖို့ အဓိကထားကူညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ မရှိသလောက်ပဲလို့ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတဦးက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိအချိန် ကချင်ပြည်နယ်က နေရာတော်တော်များများမှာ မူးယစ်ဆေးဆုံးစွဲမှုနဲ့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေ သိသိသာသာပေါများလာနေပြီး အခုအချိန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်သုံးစွဲမှုရဲ့ အမြင့်ဆုံး အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီး နှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတဦးက မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/539670
၂၃။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့ကျင်းပနေသည့် လူစုလူဝေးဘက် စစ်တပ်လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူ ၃ ဦးကျည်စထိမှန်
ဖားကန့်မြို့ လုံးခင်အုပ်စု မှော်ပုံ မဒဲ့ယာန်ကျေးရွာတွင် ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အသက် (၇၇) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကျင်းပနေချိန် စစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့် ပြည်သူ ၃ဦး ကျည်စထိမှန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီဝန်းကျင် လုံးခင်အုပ်စု ပြည်သူများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့ကျင်းပနေချိန် ဖားကန့်အချုပ်ထောင် ဘက်မှ သပိတ်ကျင်းပနေသည့်ဘက်သို့ လက်နက်ကြီး ၂ ချက် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက်ပြည်သူ ၃ဦး ကျည်စထိမှန်ခဲ့သည်ဟု သပိတ်ဦးဆောင်သူတစ်ဦးက KNG သတင်းဌာနကို ပြောဆိုသည်။ “ကျနော်တို့ မွေးနေ့နဲ့ စစ်အာဏာဆန့်ကျင်တဲ့ သပိတ်လုပ် နေတဲ့နေရာ အချုပ်ထောင်က ဟိုဘက် ဒီဘက်ဟုတ်တယ် သပိတ်လုပ်နေတဲ့ချိန် ပစ်ထည့်လာတာ ခုထိတာက သပိတ်မှာပါတဲ့ သူတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘေးနားမှာရှိတဲ့ အိမ်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေ ၃ယောက်ထိသွားတယ် ‌အခြေနေကတော့ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး” ဟု ပြောဆိုသည်။
လက်နက်ကြီးကျည်စထိမှန်သူ ၃ ဦးမှာ အမျိုးသမီး ၂ ဦး အမျိုးသား ၁ ဦးဖြစ်ကာ ပေါင်၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက်တို့ တွင် ထိမှန်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ထို့ပြင် လက်နက်ကြီးကျည်စ ထိမှန်သည့်အတွက် အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်မှ ကားတစ်စီး မှန်ကွဲသွားသည့်အပြင် နေအိမ်အချို့သို့ ကျည်စထိမှန်မူများရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ “လက်နက်ကြီး ပစ်နေလဲ ကျနော်တို့တော့ သပိတ်အောင်မြင်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြောချင်တာကဘယ်လောက်ပဲခြောက်ခြောက် မကြောက်ဘူး ဆိုတာပါပဲတော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေအနေနဲ့ လုပ်စရာရှိတာဆက်၍ လုပ်ဆောင်သွားကြမယ်”ဟု လုံးခင်းသပိတ်ဦးဆောင်သူက ပြောသည်။ https:// burmese.kachinnews.com/2022/06/19/jun19-zm2/
၂၄။ တိုက်ပွဲဆက်မဖြစ်ရန် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနေ့တွင် စစ်ဘေးရှောင်များတောင်းဆို
ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနေ့တွင် စစ်ရေးပဋိပက္ခများကြောင့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့် စစ်ဘေးရှောင်များက ရခိုင်ပြည်အတွင်း တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမ ဖြစ်ပွားကြ ရန် တောင်းဆိုလိုက်ကြသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့သည် သဘောထားတင်းမာနေပြီး တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားရန် အလားအလာရှိနေသည့်ကာလတွင် စစ်ဘေးရှောင်များက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကို ထိုသို့တောင်းဆို လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ကျနော်တို့မှာ ဒီတစ်ခါတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်လာရင် ဆက်ပြေးစရာနေရာမရှိတော့ဘူး။ အခုအခြေအနေမျိုးမှာတောင် စစ်ရေးအခြေအနေမကောင်းတော့ ဘယ်နေ့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို တွေးပူပြီးကြောက်လန့် နေရတယ်။ ကျနော်တို့ ဆိုရင် တိုက်ပွဲစဖြစ်ကတည်းကနေ အခုချိန်အထိ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ဒေသကို မပြန်နိုင်ဘဲ စစ်ဘေးရှောင် ဘဝနဲ့ သုံးနှစ်ကျော်နေခဲ့ရပြီ။ ကျနော်တို့အားလုံးအိမ်ပြန်ချင်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ပြန်ခွင့် မရသေးဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်ရင် ကျနော်တို့နေရပ်ပြန်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အိမ်မက်တစ်ခု ဖြစ်သွား ပါပြီ။ဒါကြောင့် စစ်ဆိုတာကြီးကို ကျနော်တို့မလိုလား တော့ဘူး” ဟု ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ညောင်ချောင်း စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ ကိုကျော်လှကပြောသည်။
အလားတူ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ပီပင်ရင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ ဦးမောင်စိန်ကလည်း လက်ရှိတွင် မြန်မာစစ်တပ် ၏တပ် စခန်းအများစုမှာ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများ၊ကျေးရွာများနှင့်နီးကပ်သည့်နေရာများ၌ရှိနေသဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာလျှင် ပြည်သူ များ လည်းထိခိုက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်ရသဖြင့် တိုက်ပွဲများမဖော်ဆောင်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပွဲဝိုင်းပေါ် တွင်အဖြေရှာစေလို ကြောင်း ပြောသည်။ “ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့မှာ ကျနော်တို့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတောင်းဆိုရရင် ကျနော်တို့ စစ်ကိုမုန်းတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် လူသေဆုံးမှုတွေ၊ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိလာမယ်။ ကျနော်တို့ စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်း အခုထက်ပိုပြီး ဒုက္ခဖြစ်လာမယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ကြားမှာ လိုလားနေတဲ့အချက်တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း ပေါ်မှာပဲ ဆွေးနွေးစေချင်တယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်း ပြည်သူလူထုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ တောင်းဆိုချက် တွေကိုလိုက် လျောပေးစေချင်တယ်။ဒါမှ တိုက်ပွဲတွေမရှိဘဲ ပြည်သူတွေ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေနိုင်မှာ”ဟုဦးမောင်စိန်ကပြောသည်။ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့ ကို နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အသိအမှတ်ပြုကျင်းပပေးရန်အတွက် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ် ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၂၅။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းသိန်း၏ နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းသိန်း၏ နေအိမ်အား စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဇွန်လ ၂၀ရက် ယမန်နေ့တွင် လာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားခဲ့ကြောင်း အိမ်ရှင်များထံမှသိရသည်။ စစ်ကောင်စီ တပ်မှ ယခုလ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်ကို ချိတ်ပိတ်ရန်အတွက် ပစ္စည်းများရွေ့‌ပြောင်း‌ပေးရန်လာ‌ရောက်‌ ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက် ဇွန်လ ၂‌၀ ရက်နေ့တွင် ကား ၅စီးဖြင့် ရဲနှင့်စစ်သား ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့် ထပ်မံလာရောက်ရှိလာပြီး နေအိမ်ကို ချိတ်ပိတ် သွားသည်ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းသိန်းက KNG သတင်းဌာနကို ယခုလိုပြောဆိုခဲ့သည်။ “မနေ့ နေ့လည်ပိုင်း က ကား ၅ စီးထဲမှာ စစ်သားနဲ့ ရဲ ၃၀လောက် ရောက်လာပြီး အိမ်ထဲ‌တော့မဝင်ဘူး။ အပြင်ကနေ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ သူတို့ သဘောနဲ့သူတို့ ဝင်ထွက် နေကြတယ်။ စာတာမကပ်သေးတာဘဲရှိသေးတယ်။ အခုက ပိတ်သလိုဖြစ်နေပြီ ပေါ့”ဟုပြောဆိုသည်။
တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေဦးတင်ထွန်းသိန်းသည် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့မ ရဲစခန်းအတွင်း ၂ နာရီခန့် အကြာ ယာယီထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ပြန်လည်လွှတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်ကောင်စီတပ်မှ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းသိန်းကို အကြမ်းဖက်မှုဖြင့် ထပ်မံဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုလို နေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရသည့်အထိ လုပ်ဆောင်လာသည့်အပေါ် သူက ယခုလိုဆက်ဆိုထားသည်။ “နိုင်ငံတောင် မတရားသိမ်းသေး တာဘဲ အိမ်သိမ်းတာတော့ ဘယ်ဆန်းမလဲ။ အခုလိုဖြစ်တော့ စိတ်က မကောင်းဘူးပေါ့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ”ဟု ပြောဆိုသည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီတပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ဆန့်ကျင်သည်ဟု ယူဆရ သူများ၊ PDF အဖွဲ့များအား ထောက်ပံ့သူများ၊ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ နေအိမ်များနှင့် ရှေ့နေတစ်ချို့၏ နေအိမ် များကို ချိတ်ပိတ်မှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/06/21/jun21-zm1/
၂၆။ ABSDF သင်တန်းဆင်းပွဲ ယောဒေသတွင် ပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) ၏ စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတခုကို ဇွန်လ ၂၀ ရက်က ယောဒေသ တနေရာ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ABSDF က ၎င်းတို့ Facebook တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀ ခန့်ပါဝင်ကြောင်း ABSDF က ထုတ်ပြန်သည့် ပုံများအရသိရသည်။ ABSDF ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေး တော်ပုံ ဖြိုခွင်းခံရပြီးနောက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့် ကျင်သည့် ကျောင်းသား များ၊ အလုပ်သမားများ၊ လယ်သမားများနှင့်လူငယ်များက မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်အသီးသီးသို့ ထွက်ခွာကာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ABSDF သည် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် ဌာနချုပ်ရှိပြီး စစ်ကောင်စီ ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသတွင်လည်း စခန်းခွဲများ ရှိကာ KIA နှင့် ပူးပေါင်း၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွင် စစ်ကောင်စီတပ်အား တိုက်ခိုက်မှုများရှိသည်။ ABSDF သည် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ က နေပြည်တော်တွင် အကျဉ်းချုံး ကျင်းပသည့် NCA ၆ နှစ်ပြည့်ပွဲသို့ ဗဟို ကော်မတီဝင်တဦး တက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလဆန်းတွင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင် လှိုင် ဖိတ်ခေါ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း အားလုံးပါဝင်သည့် တန်းတူဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် ပြည့်စုံသော အခင်းအကျင်း မရှိသဖြင့် မတက်ရောက် နိုင်ဟု ABSDF က ကြေညာခဲ့သည်။